February 5, 2018 – OLI
February 5, 2018 February 5, 2018 OLI
Beekkumsi bu’uurafi utubaa waan hundaati. Dhaloonni tokko biyya isaatiif karaa hawaasummaa, dinagdee, siyaasaafii kanneen birootiinis bu’aa buusuudhaaf beekkumsa gahaa qabaachuu qaba. Kanaaf immoo barruulee adda addaa dubbisuunifi beekkumsa horachuun barbaachisaadha.
Dabalataanis waan tokko dubbisuun faaydaalee bu’uuraa hedduu qaba. Kanneen keessaa ijoon dandeettii waa xiinxaluu keenya dagaagsuuf, hiraara/cinqama sammuu xinneessuuf, jechoota haaraa baruuf, bashannanaaf, xiyyeeffannaa keenya dabaluufi kkf ni dha. Haa ta’u malee sababoota garagaraatiin dargaggoon aadaan dubbisaa isaa laafaadha. Dargaggeessi dubbisa aadaa godhatee guyyaa guyyaadhaan, torbee torbeedhaan dubbisu lakkofsi isaa xinnaadha. Keessattuummoo biyyoota akka keenyaa keessatti rakkoon kuni ol’aanaadha.
Rakkoo kana furuudhaan fedhiin dargaggoon keenya dubbisuuf qabu akka dabalu, kitaabotaafi barruuwwan faayda qabeessa ta’an cuunfaan isaanii fuula kana irratti kan dhiyaatan ta’a. Barruulen kunneen kanneen dandeettii hoggansaa dargaggoo keenyaa dabaluufi xiinsammuu isaanii dagaagsu irratti xiyyeffata. Kitaabbileenifi barruuleen xiyyeffannaan itti kennamus kanneen hoggansaa ( leadership), xiinsammuu ( psychology) akkasumas jijjirama bu’uurawaa dhuunfaa ( personal transformation) ti.
“ Dur Hoggansa Jechuun Irree jajjabaa ta'e qabaachuu natti fakkaata ture. Boodarra yeroon xiinxalee ilaalu garuu hoggansa jechuun fedhii uummataatiin masakamuudhaan uummaticha qabatanii waliin ofdura tarkaanfachuu akka ta’een hubadhe.” Mahatma Gaaandii , Hogganaa Qabsoo Uummata Hindii